के परमेश्वर र विज्ञानमा विश्वास गर्न विरोधाभास हुन्छ?
विज्ञानको परिभाषा "अवलोकन, पहिचान, वर्णन, प्रयोगात्मक जाँच र घटनाहरुको सैद्धांतिक स्पष्टीकरण" को रूपमा दिन्छ। विज्ञान त्यो पद्धति हो जसलाई मानिसले प्राकृतिक ब्रम्हाण्डको धेरै समझलाई प्राप्त गर्नको लागि उपयोग गर्न सक्छ। यो अवलोकनद्वारा ज्ञानको खोज गर्नु हो। विज्ञानमा अघि बढनु मानिसको तर्क र कल्पना सम्म पुग्नको प्रदर्शित गर्दछ। फेरीपनि, एउटा विश्वासीको जुन किसिमको विश्वास विज्ञानमा हुन्छ त्यसै नै हाम्रो विश्वास परमेश्वरमा हुनु हुदैन। एउटा विश्वासीको परमेश्वरमा विश्वास र विज्ञान प्रति सम्मान हुन सक्छ, जब सम्म हामी यो स्मरण राख्छौं कि कुन कुरा पूर्ण छ र कुन कुरा छैन।
हाम्रो परमेश्वरमा विश्वास, विश्वासको मान्यता हो। हाम्रो विश्वास उद्धारको लागि उहाँको पुत्रमा, निर्देशहरुको लागि उहाँको वचनमा, र मार्गदर्शनको लागि उहाँको पवित्र आत्मामा हुन्छ। परमेश्वरमा हामीहरुको विश्वास पूर्ण हुनु पर्दछ, किनकी जब हामी हाम्रो विश्वासलाई परमेश्वरमा राख्छौं, तब देखि एउटा पूर्ण, सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वरको माथि निर्भर हुन्छौं। विज्ञानको माथि हाम्रो भरोसा बौद्धिक हुनु पर्छ र यो भन्दा धेरै होइन। हामी विज्ञानको माथि धेरै ठूलो कुराहरुको लागि निर्भर हुने दावा गर्छौं, तर साथैमा हामी विज्ञानद्वारा गलतिहरुको गरिनुको लागि पनि दावा गर्न सक्छौं। यदि हामीले हाम्रो विश्वासलाई विज्ञानको माथि राख्छौं भने, तब हामी एक अपूर्ण, पापले भरिएको, सीमित, नाश्वान मानिसको माथि निर्भर हुन्छौं। अहिले सम्मको इतिहासमा धेरै कुराहरुमा विज्ञान गलत साबित भएको छ, जसरी पृथ्वीको आकार, प्रकाशको शाक्ति, खोपहरुको बारेमा, रक्ताधान गर्नु र यहाँ सम्म कि प्रजननको लागि। परमेश्वर कहिल्यै पनि गलत साबित हुनु भएको छैन।
सत्यता यो हो कि डराउने जस्तो केहि कुरा छैन, त्यसैले यस्तो कुनै पनि कारण छैन जसमा एक विश्वासीलाई राम्रो विज्ञानको लागि डराउनु पर्छ। जसरी परमेश्वरले हाम्रो ब्रम्हाण्डको रचना गर्नु भयो यस तरीकको बारेमा धेरै सिक्न सबै मानिसहरु जातिलाई सृष्टिको आश्चार्यको सराहना गर्नुमा सहायता गर्दछ। हाम्रो ज्ञानमा विस्तार बिमारी, अज्ञानता र गलतफहमिहरु देखि लड़नमा सहायता मिल्छ। फेरी पनि, यहाँ निर खतरा छ जब वैज्ञानिक आफ्नो विश्वासलाई हाम्रो सृष्टिकर्तामा विश्वास राख्नु भन्दा माथि मानवीय तर्कमा विश्वास गर्नलाई पकडी राख्छन। यस्तो मानिसहरु बाट बिल्कुल पनि भिन्न छैनन जो एक धर्मको प्रति समर्पित हुन्छन; उनीहरुले मानिसहरुले एक धर्मलाई चुनेका छन् र त्यस विश्वासको रक्षा गर्नको लागि तथ्यहरुलाई प्राप्त गर्ने छन्।
तर फेरी पनि, सबैभन्दा अधिक तार्किक वैज्ञानिक, यहाँ सम्म त्यो पनि जो परमेश्वरमा विश्वास गर्न इन्कार गर्छ, ब्रम्हाण्डको प्रति हाम्रो समझलाई पूर्णतामा कमी हुनलाई स्वीकार गर्दछ। यिनीहरुले त्यो स्वीकार गर्छन कि न त परमेश्वर र न त बाइबललाई विज्ञानद्वारा प्रमाणित र अप्रमाणित गर्न सकिन्छ, ठीक त्यसै गरि जसरी उनीहरुको धेरै जस्तो मनपर्दो सिद्धान्तहरुलाई अंतत: न त प्रमाणित र न त अप्रमाणित गर्न सकिन्छ। विज्ञान वास्तवमा तटस्थ अवधारणालाई अर्थ राख्दै, केवल सत्यताको खोजी गरि रहेको छ, न कि कुनै कार्यसूचीमा तरक्की गरि रहेको छ।
विज्ञानको अधिकांश भाग परमेश्वरको कार्य र अस्तित्वलाई समर्थन गर्दछ। भजन संग्रह 19:1 कहता है "स्वर्गले परमेश्वरको महिमाको विषयमा बोल्छ। आकाश-मण्डलले उहाँका हातबाट बनिएका राम्रा-राम्रा कुराहरूका विषयमा भन्दछ।" जस्तै कि आधुनिक विज्ञान ब्रम्हाण्डको बारेमा र धेरै खोजहरु गर्छ, हामी सृष्टिको र अधिक प्रमाणहरुलाई पाउदै जान्छौं। अनुवंशिक या डी.एन.ए. को प्रतिकृति र अद्भुत जटिलता, भौतिकको आपसमा जोडिदै र जटिल नियम, र यस पृथ्वीमा परिस्थितियहरुको पूर्ण सद्भाव र रसायन सबै बाइबलको सन्देशलाई समर्थन गरि रहेको छ। एक विश्वासीले त्यस विज्ञानको उपयोग गर्नु पर्छ जसले सत्यको खोजी गर्दछ, तर "विज्ञानको पण्डितहरु" लाई इन्कार गर्दछन जसले मानवीय ज्ञानलाई परमेश्वर भन्दा माथि रख्द छन्।